Usoro nri - usoro iji mee ya ọfụma | Nutri Nri
.Nnɛ enwere ọtụtụ narị nri nkwa ahụ na-ekwe onye kpebiri iso ha, nsonaazụ ozugbo jiri iwu nke obere mbọ. A maara ha nke ọma dịka ọrụ ebube, ụdị nri a nwere ndị na-asọ oyi na ndị na-agbachitere ya. Oge a ka m ga-agwa gị gbasara a nke ndị kasị ewu ewu na ihe ebube kari: isi nri.
N'ezie ị ga-anụwo banyere ya na i nwere mmasị ịmata ma ọ na-arụ ọrụ ma ọ bụ nwere mmetụta dị egwu rebound dị ka ọ na-adị n'ọtụtụ nri nke ụdị a. Ọzọ, m ga-agwa gị ihe gbasara ihe ọ mejupụtara isi nri ma ọ bụrụ na enwere ike ịkọwa ya dị ka nri ọrụ ebube ma ọ bụ ya a ụdị nke ike arọ ọnwụ atụmatụ nke ahụ ga - enyere gị aka ịkwụsị ibu na iwepụ ndị amara kilo.
1 Kedu ihe bụ nri nri?
2 Kọ ihe ụfọdụ nke ihe oriri
3 Obu nri ebube?
Kedu ihe bụ nri nri?
Typedị nri a na - arụ ọrụ n’ime ụzọ dị iche na nke mbụ jiri ya tụnyere ụdị ụzọ ibu ibu ndị ọzọ. Ihe oriri na ajụjụ akara nri dabere na protein, abụba ma ọ bụ carbohydrates ha nwere. Ihe niile i rie, rie nwere isi ihe, n'ozuzu nri ndị nwere calorie nwere ọtụtụ isi na caloric kachasị mma ma ọ bụ obere ha nwere obere ihe.
Onye obula kpebiri ibido udiri nri a ụdị mpempe akwụkwọ ụbọchị ọ bụla nwere isi okwu di iche na-adabere na okike, ibu ma obu afo onye ahu. Kwa ụbọchị, Onye ahụ nwere ike iri nri ruo mgbe ha ruru usoro ihe na ọtụtụ, otú i nwere dee na-esochi nke isi ihe ejiri ka ịghara ịgabiga na njedebe ahụ. Isi nri na-enye gị ohere iri nri ụdị nri ọ bụla ọ bụrụhaala na onye ahụ agaghị agafe ihe ndị a na-eri.
Dị ka ndị na-akwado ụdị nri a, ma ọ bụrụ na ị na-agbaso iwu na ụkpụrụ guzosiri ike ị na-ifelata enweghị nsogbu ọ bụla. Agbanyeghị, egosighi ya na ọ naghị eme a rebound mmetụta na njedebe na na ọ bụ 100% nke a nri na edozi. Ọ bụrụ na onye mechara mezue nri ahụ, agbanwela àgwà gị ma soro ụdị nri na edozi, I nwere ike iburu ibu ọzọ.
Kọ ihe ụfọdụ nke ihe oriri
Mgbe ọ na-abịa mara ma ọ bụrụ na ndị a ma ama nri nke ihe ọ dịghị emerụ ahụ ike, ọ dị mkpa ị toa ntị na njiri mara ọ ga - enwerịrị nri kwesiri ekwesi.
Ga-enweta nguzozi n’agbata calorie a na-etinye nri ya na ndị a na-emefu kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na ha ejiri obere kalori ka ị na-eri, nri a anaghị atụkwasị obi ma ọ bụ kwadoro, nke mere na ọ na-emerụ ahụ ike.
Mee ka oriri nke abụba ndị na-adịghị edozi ahụ belata ma belata oriri nke zuru abụba na trans abụba.
Mee ka nri dị ka akwụkwọ nri, mkpụrụ osisi, mkpụrụ, ọka niile na mkpo.
Belata oriri nke shuga na nnu n'oge nri niile.
Ọ bụrụ na ị na-edepụta nkọwa ndị a isi nri, ị nwere ike ịlele na enwere obere kalori oriri ebe ọ bụrụ na nke a abụghị ikpe, ọ gaghị ekwe omume iwelata ibu. Kama nke ahụ, site na ọ dị ngụkọta nnwere onwe iri nri, enwere ike inwe mmadu erila nkpuru osisi ma obu akwukwo nri mgbe ị na-eso ụdị nri a. Na mgbakwunye na nke a, onye ahụ nwere ike ịga n'ihu na-eri jupụta ma ọ bụ ju abụba nke ahụ dị njọ n’ezie maka ahụ gị. Isi okwu bụ na ọ gbasara nke nri ebube nke ahụ ga - enyere gị aka ịkwụsị ibu na obere oge mana na n’ikpeazụ nwere mmetụta dị egwu rebound nke ga - eme ka ị nweta ọtụtụ kilo karịa na mbido nri.
Obu nri ebube?
Site na isi isi nri anaghị ekwe nkwa ibu ibu na oge ndekọ dị ka a ga - asị na ha na - eri ọtụtụ ọrụ ebube. Nke a na ụdị nri ana achi achi na ị ida n'etiti ọkara kilo na kilo otu izu, ihe ezi uche dị na ya nke ahụ nwere ike ịdị n'ime ụkpụrụ n'ụdị ọ bụla ike arọ ọnwụ atụmatụ. Ihe ịga nke ọma nke nri a bụ na ha na-eri nri obere kalori nke ndị na-ere ọkụ. Yabụ ọ bụrụ na ịmee ezigbo nhọrọ nke nri na nri need chọrọ na ụbọchị gị, ọ nweghị ihe mere ị ga-eji tụlee isi nri dị ka nri ọrụ ebube.
Ọ bụrụ na mgbe agwụchara kwuru nri, ị ka na a ụdị edozi na edozi nri site na nri ndị dị mkpa ma ị gbakwunye ya na-emega ahụ kwa ụbọchị, ị gaghị enwe nsogbu ọ bụla iji mee ka ibu gị ma ghara ijide nke ọ bụla nke kilogram furu efu isi nri. Ọzọ plus point nke ụdị nri a, bụ na ọ naghị amanye gị ịzụta ihe oriri na nri iji kwụọ ụgwọ maka enweghị nri, ebe ọ bụ na nri nke isi ị nwere ike iri ihe niile na ewepughi nke obula nri ndị dị mkpa na ahụ kwesịrị ịrụ ọrụ nke ọma.
Na nkenke, isi nri ọ bụ usoro iji felata dị nnọọ ka ọ dị irè ma zie ezie karịa ndị ọzọ ụdị nri na oké akpan akpan na chịkọta nri n'ime otu dị iche iche dịka calorie ha si dị mkpa. Ọ bụrụ na ị kpebie ịga n'ihu ụdị nri a , ọ dị mkpa ka ị gbanwee gị àgwà iri nri maka ọdịnihu ebe ọ bụ na uzọ ọzọ sị nri ọ gaghị enwe isi. Cheta na oburu na isoro otu nri na edozi ị ga-efunahụ kilo ndị ahụ na-enye gị nsogbu nke ukwuu ma ị ga-eme ya n'ụzọ ahụ ị gaghị emerụ ahụ ma ọ bụ nye ahụ ike gị ma ọ bụ n'arụ ahụ́ gị.
Mgbe ahụ, m tinyere gị ihe nkọwa video banyere isi nri na ihe ọ ga - enyere gị aka ịmatakwu Nke nri.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nutri Nri » Nkwere maka enyemaka » Isi nri
Ugu ude uzommeputa
Etu aga-esi merie oke nchekasị na nkụda mmụọ